Google inoda kushandura nhare dzeApple kuita sensors dzedenga | Linux Vakapindwa muropa
Google inoda kushandura mafoni eApple kuita sensors yekudengenyeka kwenyika
Google iri mubishi rekugadzira yambiro yekudengenyeka kwenyika dzinofambiswa neApple mafoni uye chikamu chekutanga chegadziriro iyi chakatangwa nezuro.
Kana ukasarudza ino, Accelerometer (sensors dzinoyera iko kutungamira uye simba rekufamba) iro rinoshandiswa mumidziyo mizhinji yakangwara uye iriko mumidziyo yeApple inozoita data poindi yealgorithm yakagadzirirwa kuona kudengenyeka kwenyika. Pakupedzisira izvi system ichatumira zviyeuchidzo otomatiki kuvanhu vanogona kukanganiswa.
Nhanho yekutanga chii chiri kupihwa neGoogle kuti uwane izvi ndezvekuti iri kubatana neUnited States Geological Survey uye neCalifornia Office yeEmergency Services kutumira agency yekudengenyeka kwenyika kune vashandisi veApple mune iyo mamiriro.
Aya machenjedzo anogadzirwa ne iyo iripo ShakeAlert system, iyo inoshandisa dhata inogadzirwa neyechinyakare seismometers.
Muchikamu chechipiri nechechitatu Chirongwa cheGoogle mafoni ese eApple achasanganisirwa.
Padanho rechipiri, ndizvo uko Google icharatidza mhedzisiro yenzvimbo mukutsvaga kwepasi zvichibva pane iro data rainoona kubva kuApple mafoni. Pfungwa ndeyekuti kana iwe uchinzwa kudengenyeka kwenyika, unoenda kuGoogle kuti uone kana zviri izvo zvawakanzwa kana kwete.
Pakupedzisira, kana uchinge wawana chivimbo chakanyanya mukujeka kwesisitimu, Googlee ichatanga kutumira kushingaira kutumira yambiro kudengenyeka kwenyika kuvanhu kugara munzvimbo dzisina kana seismometer-based alert system.
Nezvo, nhare yeApple inogona kuve "mini seismometer" nekuti yakagadzirirwa necomputer. Iyo Android system inoshandisa iyo data kubva kune ino sensor kuona kana foni iri kudedera. Iyo inongoshanda chete kana Android foni ichichaja uye isiri kushandiswa, kuchengetedza hupenyu hwebhatiri.
“Isu takaona kuti mafoni eAroid anonzwisisa zvakakwana masaisai ekudengenyeka kwenyika. Kana mhepo yekudengenyeka ikapfuura, ivo vanokwanisa kuiona uye kazhinji vanoona iwo makuru maviri mafungu, iyo P wave uye iyo S wavese.Mafoni ese anogona kuona kuti chimwe chinhu chiri kuitika sekudengenyeka kwenyika, asi wozoda mafoni mazhinji kuve nechokwadi. nezve chii
Iyo P wave (yekutanga wave) ndiyo yekutanga uye inokurumidza wave kuburitsa kubva kune epicenter yekudengenyeka kwenyika. Iyo S wave (yechipiri wave) inononoka, asi inogona kuve yakakura kwazvo. Sisitimu yeGoogle inokwanisa kuona zvese zviri zviviri. “Nguva zhinji vanhu havangatombonzwa wave P nekuti iri diki, nepo S wave inokanganisa zvakanyanya. Wave P chingave chinhu chinokuudza kuti ugadzirire S wave. "
Iyi data inogadziriswa munzira yeGoogle nzira: uchishandisa algorithms pane akaunganidzwa data kubva kuzviuru zvemafoni kuona kana kudengenyeka kwenyika kuri kuitika.
Iko kuchinyakare seismometers anodhura uye akarurama, nhare dzeApple dzakachipa uye dzakawanda. Google inogona kushandisa mafirita uye mamwe maalgorithms kushandura aya manhamba pane kudengenyeka kwenyika data rakaringana kutumira zviyeuchidzo.
Google inoti sisitimu yayo inokwanisa kuwana iyo epicenter uye ona simba rekudengenyeka kwenyika.
Kunyangwe izvi, iyo yakakosha fizikisi yemasaisai aya zvinoreva kuti pane miganho pane izvo zvinogoneka, anotsanangura:
“Chinhu chakakosha ndechekuti mafoni ari padyo nekudengenyeka kwenyika anogona kubatsira vanhu. vashandisi vari kure kuti vazive kuvapo kwayo. Imwe yekukanganisa kweiyo system ndeyekuti isu hatigone kuzivisa vese vashandisi kudengenyeka kwenyika kusati kwavarova. Vashandisi vepedyo nenzvimbo huru yekudengenyeka kwenyika vanogona kunge vasina yambiro munguva, sezvo tisingafungire kudengenyeka kwenyika zvisati zvaitika. "
Kumhanya uku zvakare kunoreva kuti Google's Android-based yambiro system haizove nemunhu pakati, sezvo yambiro idzi dzinotangira pa "masekondi mashoma" padhuze nepakati pe 30 kusvika 45 masekondi kunze.
“Tine vazhinji vezvesaism pachikwata icho vari muchikepe nesu. Pakati pawo pana Richard Allen, uyo akapa kwakawanda kwebasa rake kudengenyeka kwenyika kwekutanga masystem uye akabatsira mukugadzirwa kweiyo ShakeAlert system, uye zvakare akavaka system yekuona kudengenyeka kwenyika. mhara parunhare kare "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inoda kushandura mafoni eApple kuita sensors yekudengenyeka kwenyika
Kugadziriswazve kweMozilla. Zvimwe zvakawanda zvaizivikanwa